(Hadhwanaagnews) Wednesday, June 13, 2018 20:39:56
Wiilkii baanu gorodda is darnay. Horta wuxuu igaga bilaabay X-ray ama qalabka lafaha lagu eego waa in aad martaa inta aanaan hawsha galin.
Wiilkii baanu gorodda is darnay. Horta wuxuu igaga bilaabay X-ray
ama qalabka lafaha lagu eego waa in aad martaa inta aanaan hawsha galin. Hagaag... Waan maray. Waanu isku soo laabanay. Waxa uu ii sheegay in ilkahayga gabigooduba ay u baahan yihiin in dhulka la dhigo oo kuwa kale la ii galiyo. Waxa aan ka cabanayaana gaws ama laba kama badna.